Games ho an'ny ankizilahy
Racing, voynushki, miady, traikefa nahafinaritra, fanorenana, fanatanjahan-tena – rehetra lalao an-tserasera ho an'ny ankizilahy. Eto dia afaka hilalao, mamono biby goavam-be, vahiny, na fotsiny fahavalo andia fahavalo. Manaova lapan'ny mpanjaka, handray miaramila hifehy ny milina. Misy kilalao Sahisahy ratsy tanteraka, izay ny ranomasina ny ra sy ny fandringanana. Afaka ho lasa sniper na ny fiantranareo mpihaza, kamikaze ninjas sy ny mpanova. Raiso be dia be ny skydiving sy ny fiara fiara mifono vy, fa amin'ny Superman manao asa feno herim-po. Avy eo mandeha tany amin'ny nalehany, hahita kintana iray vaovao.
Lalao Games ho an'ny ankizilahy tamin'ny Category:
Farany Games ho an'ny ankizilahy
Lalao Online Games ho an'ny ankizilahy
lalao ho an'ny ankizilahy - ny ady filaminana
Inona no tena fitiavana ny ankizilahy? Azo antoka, lalao baolina, ririnina mavitrika firavoravoana feno fietrena, voynushki an'eritreritra traikefa nahafinaritra. Izay tia ny mampidi-doza, mba haorina, dia hiady. Izay rehetra ary vonona kokoa lalao ho an'ny ankizilahy amin'ny aterineto.
Tsy misy fitaovam-piadiana ny fakan-tahaka toa samy hafa sy ny hery avy faran'izay tsotra kibay, slingshots sy jiolahy ny molekiolan'ny disintegrator tamin'ny laser fametrahana amin'ny sambon-danitra. Efa nanomana ho anao hiady amin'ny dragona, fa mety ho tena voakolokolo, ary izy ireo dia hanampy anao amin'ny ady amin'ny biby goavam-be hafa.
hiaro ny fiarovana ary tilikambo, fananganana milina tao amin'ny paritra. Hanomboka ny balafomanga an-toerana, mitady planeta vaovao sy hametraka azy ny fahefana. Na niditra tao amin'ny mpifanolo-bodirindrina vaovao ny fifanekem-pihavanana sy ny fifandraisana ara-barotra Naladte.
Asehoy ny herinao amin'ny ady totohondry, karate, na mandeha any amin'ny virtoaly dalambe mikisaka amin'ny andian-jiolahy ny jiolahim-boto. Ny zavatra lasa ny fitaovam-piadiana, ary ny iray dia tsy maintsy hanohitra hanohitra ny ekipa. Na dia sekoly lalantsara dia tsy azo antoka, satria ny mpianatra dia nizara ho vondrona sy miady eo ireo. Arovy ny faritra avy amin'ny fanafihana ny mpiavonavona olon-tsy fantatra.
Aoka ho Pirates - oram-baratra ranomasina sy milamina sambo. Raiso nandray sambo, hijery ny harena Map nihady harena, fa tsy dingana eo amin'ny faritra milevina. Handamina gunfight basy, manipy ny fototry ny fahavalo sambo, ary milalao ao amin'ny tena dranomasina ady.
mba hanaporofo ny tenany ao amin'ny fanatanjahantena
Fidio ny taona, fanatanjahan-tena fitaovana dia ho tanteraka na inona na inona toe-javatra vonona. Racing avy amin'ny tena tsotra ny firazanana ny ho avy hiverina ny mankaleo ora hariva ny fientanam-po, indrindra raha nasaina hilalao hafa. Ny lalana no ho tanàna, fiara ampy, tendrombohitra, rano toerana, rivotra toerana sy ny toeram-pambolena.
Conquer ny ririnina tehezan-tendrombohitra tia manao ski ambony, snowboarding, sledding sy toboggan. Mitifitra tanjona, hilalao tenisy lehibe na kely, mba hanipy ny baolina eo anatin'ny harona, na hianatra hilalao volley amoron-dranomasina. Ao amin'ny lava mitsambikina, tsato-kazo andohalambony eny, ary ho lasa lavitra mpihazakazaka, ary rehefa reraka ny mpanao fanatanjahan-tena, milalao baolina kitra na billiards latabatra.
Raha te Adventure, ho vonona amin 'ny zavatra rehetra
Adventure lalao ho an'ny ankizilahy mbola azo antsoina hoe Adventure. Eo anatrehan'ny iray amin'ireo litera afaka mandeha hitady ny lalana an-trano, ary afaka hanadino ny momba ny fampiononana ny an-trano, ary miezaka ho any izay misy ny loza.
Raha tsy matahotra ny mpivadika vampira, zombies, werewolves sy kosmitov, namely ny lalana, na dia tsy manana fitaovam-piadiana - tokoa teny an-dalana zavatra avadika. Ny afo sy ny rano, Papa Louis, Mario sy Sonic, McCoy, boky tantara an-tsary mahery fo, sy ny maro hafa be herim-po mampidi-doza mahery fo miady zavaboary, manangona rakitry ny ela, manao kilalaon-tsaina, mazes izany.
Online lalao ho an'ny ankizilahy ny sokajin-taona rehetra
indraindray ankizilahy kely toa miezaka be taona sy hitondra sarotra mahafinaritra miaraka amin'ny isan'ny sarotra fitsipika, toe-javatra sy ny fomba fanaraha-maso. Fa ny olon-dehibe tsy mampaninona ny mpilalao manana fahafinaretana ao amin'ny tselatra kilalao tamin'ny kely indrindra ny fivoriambe sy ny fifadian-kanina andalan-teny, tia vazivazy sy tsy fahampian'ny fahamatorana jaza. Lalao ho an'ny tovolahy eo amin'ny toerana mamela, tsy an-kanavaka, ny mpilalao rehetra hahita ny tari-dalana, na:
rehetra dia havaozina foana lohateny voly novelties, izay, mazava ho azy, misy ho anao maimaim-poana. Te mahaliana tianay ianao, fa rehefa milalao, foana isika hitady izay mbola gaga.